Wax kasta oo ku lug lahaa dhismaha beer dabaysha ah | Cusbooneysiinta Cagaaran
Weligaa ma aragtay a Eolico Park funcionando. Marawaxadaha dabaysha iyo garkeeda oo dhaqaaqa oo dhaliya tamar. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan ka dib, waxaa jira daraasad weyn oo ku saabsan dabaylaha, booska marawaxadaha dabaysha, awoodda lagama maarmaanka ah, iwm. Qoraalkan waxaan ku arki doonnaa tallaabo-tallaabo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dhismaha beer dabaysha ah.
Ma rabtaa inaad barato wax kasta oo ay dhaliso tamarta dabayshu?
1 Qiyaasta dabaysha
2 Cabirka aagga
3 Xisaabinta waxqabadka jardiinada
4 Marxaladda kahor dhismaha beerta dabaysha
5 Walxaha dhismaha
6 Waa maxay howlaha dayactirka ee ay leedahay xarunta dabaysha?
Sida iska cad waxaan ka hadlaynaa tamarta dabaysha, sidaa darteed daraasadda koowaad ee ugu muhiimsan taas waa la qabtay waa dabaysha. Waa lagama maarmaan in la ogaado nidaamka dabaysha ee ka dhaca aagga laga dhisayo xarunta dabaysha. Muhiim ma aha oo kaliya in la ogaado nooca dabaysha jirta, laakiin sidoo kale xawaaraha ay ku socoto iyo inta jeer ee ay socoto.
Waqtiyada loo isticmaalo in lagu cabbiro dabaysha way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay ujeedada mashruuca. Cabbiraadu guud ahaan waxay cabiraan hal sano. Sidan oo kale, waxay ka fogaadaan hubin la'aanta ah in aan la cabbiri karin qayb ka mid ah sannadka oo markaa kalsooni badan ayay ku qabaan xogta.
Si loo cabbiro dabaysha waxaad ubaahantahay koox tababaran. Waxaa lagu rakibay dherer kala duwan si loo ogaado qaar ka mid ah xuduudaha oo leh xajmi weyn. Meelaha ugu badan ee la cabiro waa caarada daab, dhexda, iyo dhererka xarunta. Saddexdaan qodob, qiimayaasha dabayshu waa kuwo saxsan oo waxtar u leh dhismaha beerta dabaysha. Marka la diyaariyo munaaradaha wax lagu qiyaaso iyo wiishka, aaladaha ayaa la dhigayaa. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro doorsoomayaasha sida aaladaha anemometer, hygrometers, vanes, heerkulbeegyada iyo barometerka.
Waa inaad tixgelisaa tirada guud ee ay yeelan karto dabaysha dabaysha, iyadoo kuxiran miisaaniyadda la heli karo. Waa suurtagal inaan helno aag ballaaran oo leh dabeyl wanaagsan oo soo celin wanaagsan ku siin doonta baarkinka, laakiin aan haysan awood dhaqaale oo ku filan oo aan ku fulino shaqada. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan ogaadaan cabirka aagagga qorshaysan jadwalka dhismaha, acreage la heli karo, astaamaha dhulka iyo muuqaalada, iyo moodooyinka qaarkood ee marawaxadaha dabaysha laga yaabo inaad rakibtay.
Iyada oo ku saleysan xuduudahan, waa inaan dejino meelaha lagu dhejin doono masta. La taliye khaas ah waa inuu goobjoog ka ahaadaa dhismaha beer dabaysha. Tani waa sababta oo ah waxay muhiimad weyn u leedahay in si wanaagsan loo qeexo goobta mastaroodkooda iyo qaabeynta.
Maalgashiga qafaska oo naga caawiya inaan cabirno khayraadka dabaysha ee aan haysano ayaa muhiim u ah heerka koowaad ee mashruuca. Intaas waxaa sii dheer, waxaad u baahan tahay cabirradani inay ahaadaan kuwo waafaqsan qawaaniinta iyo heerarka caalamiga laga heli karo.
Maaddaama xogta la qiyaasayo sanadka oo dhan, waa muhiim in si wanaagsan loola socdo cabirka. Xitaa haddii masarka loo rakibo si waafaqsan heerarka, waxaa jiri kara nooc ka mid ah dhibaatada u baahan in la dayactiro. Haddii dhibaatada si dhakhso ah loo xallin waayo, waxaan lahaan doonnaa muddo cabbiraad khaldan oo khaladaad u horseedi doonta.
Xisaabinta waxqabadka jardiinada
Xisaabinta in qalabka dabaysha ay qaban doonto iyo in kale waa muhiim. Sidaa darteed, arrimo badan waa in la tixgeliyaa. Mid ka mid ah waa cabirka saxda ah ee kheyraadka dabaysha xilligii ololaha.
Marka ololaha cabbirka la dhammaystiro, xog-ururin ayaa la helayaa si looga shaqeeyo. Waad qiyaasi kartaa awoodda magac ee uu baarkarku yeelan doono, astaamaha marawaxadaha dabaysha, muuqaalka dhulka, iwm. Qaybsi aad ufiican ayaa sidoo kale lagu samayn karaa xogta la helay si loo xisaabiyo wax soo saarka beerta dabaysha. Xogtan, waxaad ku ogaan kartaa waxqabadka aad yeelan doonto marka shaqooyinka la xiriira la dhammeeyo.
Waxqabadka lagu xisaabiyay heerkan ma tixgelinayo khasaaraha korantada ee la xiriira rakibidda kaabayaasha. Inta lagu jiro isticmaalka baarkinka, mararka qaarkood dhibaatooyin ayaa soo baxa oo yareeya waxqabadka. Si kastaba ha noqotee, tan lama saadaalin karo. Lama xisaabin karo inta jeer iyo inta jeer ee ay jiri doonaan dhibaatooyin u horseedaya hoos u dhaca waxqabadka.
Marxaladda kahor dhismaha beerta dabaysha
Marxaladda ka horreysa dhismaha xarunta dabaysha, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican wax looga sheego xaaladaha suuqa ee ku saabsan Maalgelinta iyo Qiimaha (CAPEX). Tusaale ahaan, shaqooyinka injineernimada u baahan in la tuuro waa inay si fiican u fahmaan goobta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira xalal farsamo oo ku saabsan arrimaha injineernimada iyo khataraha qaarkood ee la xiriira hubin la'aanta oo ay tahay in la falanqeeyo. Dhammaan xogtaani waxay ka muuqdaan maalgashiga ugu dambeeya ee beerta dabaysha.
Si aad u ogaato qoto dheer suurtagalnimada guusha ee dabaysha, waxaa muhiim ah in la ogaado liistada kala-beddelka qaboojiyaha. Isbeddelayaashaas waxaa ka mid ah waxaan ka heleynaa xaalado dhul ahaaneed iyo dhul ahaaneed, deegaan ahaan, sharci ahaan iyo dhaqan ahaan dhuleed. Waxa kale oo suurtagal ah in la falanqeeyo marin u helka aagga dabaysha, ha ahaato berriga iyo dekedaha, iyo in la ogaado xaaladaha marin ee shabakadda
Sidaa darteed, waa lama huraan in la sameeyo dhammaan noocyada noocan ah ee shaqada baaritaanka iyo sahaminta. Maaha wax isku mid ah in lagu dhiso dhul caadi ah marka loo eego goob leh dhaqdhaqaaq dhulgariir oo soo noqnoqda.
Markaad fulineyso dhismaha jardiinada, waxaa jira kala duwanaansho la tixgelinayo iyadoo kuxiran awoodda. Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale kuxirantahay hadday yihiin dhul qoyan ama meelo dhagax leh iyo cabirka marawaxadaha dabaysha.
Shaqadii ugu horaysay ee laqabtay waa madaniga ah (madal, aasaas iyo wadooyin). Shaqadani badanaa waxay qaadataa inta udhaxeysa 4 iyo 12 bilood. Kadib dhismooyinka ku xirnaanta shabakada ayaa bilaabmaya. Qaybtani badanaa waxay qaadataa waqti dheer iyadoo kuxiran kakanaanta. Badanaa waxay qaataan inta udhaxeysa 6 iyo 18 bilood. Ugu dambeyntiina, markii shaqooyinka madaniga ahi bilaabaan inay dhammaadaan, marawaxadaha dabaysha ayaa la keenaa oo la soo ururiyaa. Waxay kuxirantahay cabirkooda iyo baarkinka baaxadiisa, waxay qaadataa inta udhaxeysa 12 iyo 24 bilood.
Si loo ogaado inta awood ee aan u baahanahay, waa inaan ogaanno baaxadda baarkinka si fiican. Mid leh 30 marawaxadaha dabaysha ah waxaa dhisi kara 350 qof. Haddii aad haysatid oo keliya 5 marawaxadaha dabaysha ah, waxaad u baahan doontaa oo keliya 50 qof.
Waa maxay howlaha dayactirka ee ay leedahay xarunta dabaysha?
Maaddaama beerta dabayshu ka koobnayn oo keliya marawaxadaha dabaysha, dayactirka rakibidda oo dhan ayaa loo baahan yahay. Hawlaha dayactirka iyo kharashyada la xiriira waxay ku xirnaan doonaan cabbirka baarkinka iyo naqshada xarumaha. Tayada sare ee marxaladda dhismaha, ayaa hoos u dhigeysa qiimaha dayactirka.
Si aad u hesho tixraac, beero dabayl oo qiyaastii 30-50 marawaxadaha dabaysha ah Waxa dayactiri kara 6 qof (laba marawaxadaha dabaysha ah), mid kale 2 ilaa 6 qof oo loo qoondeeyay inay taageeraan dayactirka sannadlaha ah, kormeeraha guud, iyo hal ama laba qof oo loo qoondeeyay hawlgalka warshadda dhalisa.
Macluumaadkan, waxaan rajeynayaa inaad ku baran doontid wax kasta oo aad uga baahan tahay beeraha dabaysha iyo shaqada ay qabtaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Awoodda dabaysha » Wax kasta oo ku lug leh dhismaha beer dabaysha
Maalin wanaagsan. Immisa dhul ayaa loo baahan yahay marawaxadaha dabaysha 100 MW?
Jawaab Dr. Luis Monzon
Darci dal saaray dijo
Waxaan haystaa tallaabooyin, waxaan u baahanahay talo iyo xiriir si aan u sii wado mashruuca dabaysha
Ka jawaab Darci dal ponte
Qeexid, adeeg iyo cabir qiyaasta kalooriga gaaska